प्रधानमन्त्रीले भने : 'अयोध्यापुरी सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनुस' ! - सिम्रिक खबर
सेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झण्डै ६५ अंकले बढ्यो पूजा इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्यो फक्सवागेनको नयाँ मूल्य सूची अब अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष तथा बीमा शुल्क तिर्न सकिने हेर्नुहोस् यस्ता छन् कफी पिउनुको फाइदा र बेफाइदाहरु ! इस्लामिक स्टेटबाट प्रभावित भएर ह्वाइट हाउस र ट्रम्प टावरमा आक्रमणको योजना बनाएको खुलासा तापसी पन्नुले आफुलाई ट्रोलमा तान्ने खोज्नेलाई दिईन् कडा जवाफ
प्रधानमन्त्रीले भने : 'अयोध्यापुरी सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनुस' !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो देखाएका छन् । उनले शुक्रबार माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दै अयोध्यापुरीको अध्ययन गर्न अनुरोध गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सुवेदीले भने, “त्यहाँ के कस्ता संरचना छन्, केके बनाउनुभएको छ । भारतमा भएको अयोध्याका विषयमा त्यहाँका जनतासमेत विश्वस्त नरहेको पाइएकाले हाम्रो अयोध्याका विषयमा थप अध्ययन र संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । तपाईँहरु के के गर्दै हुनुहुन्छ, तुरुन्तै काम अघि बढाउनुपर्यो ।”
प्रधानमन्त्रीले आफूले अयोध्याका बारेमा अध्ययन गर्दा प्रमाण बलियो भेटिएको तथा सोमेश्वर गढी, वाल्मिकी आश्रमलगायत स्थानसमेत बलियो आधार भएको बताएको सुवेदीले जनाए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री अयोध्याका विषयमा माडीको टोलीसँग छलफलका लागि आतुर हुनुहुन्छ ।”
हाल माडीमा रहेका धार्मिक सम्पदा र पुरातात्विक सामग्रीको संरक्षण गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो रामनवमी पर्वमा ठूलो पूजा गरी काम शुरु गरिने बताएको वडाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । “पुरातत्विक विभागसँग समन्वय गरेर अध्ययन र संरक्षणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ”, सुवेदीले भने । हालको वडा नम्बर ९ यसअघिको अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिमा पर्थ्यो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले माडीका नगर प्रमुखसहितका प्रतिनिधिलाई भेट गर्नलाई आज बोलाएका छन् । माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले आज प्रधानमन्त्री ओलीले भेटघाटका लागि बोलाएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले गत असार २९ गते भानुजयन्तीका दिन राम नेपालकै ठोरी क्षेत्रमा जन्मेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । माडीको अयोध्यापुरी, वाल्मिकी आश्रम, गोद्धकलगायत क्षेत्रमा पुरानो मुद्रा, इँटा, पुराना भवनका अवशेषजस्ता पुरातात्विक वस्तु भेटिँदै आएको छ ।
अब अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष तथा बीमा शुल्क तिर्न सकिने
हेर्नुहोस् यस्ता छन् कफी पिउनुको फाइदा र बेफाइदाहरु !